Ahịa aka - Metal Badge
Baajị ọla: na nkenke, ọ bụ akara eji eyi n’ahụ iji gosipụta njirimara, ọrụ na nsọpụrụ. Ezigbo ihe ndekọ edere nke baajị sitere na China. Edere ya na atụmatụ Warring States, Qi CE I: “Qin mere ka ọ wakporo Qi na Han na Wei. Zhang Zijiang, onye ozi nke King Wei o ...
Nabata na 2021 na Ezi afọ ọhụrụ maka ndị enyi niile!
2020 bụ afọ siri ike nye ọtụtụ, ndị mmadụ n'ụwa niile atawo ahụhụ dị ukwuu n'ihi Covid-19. Anyị nwere obi nwute maka ndị na-alanarịghị ọrịa ahụ, ọdachi ha bụ ọdachi nke mmadụ niile. Anyị na-atụ anya na ndị mmadụ nke mba niile nwere ike ijikọta dịka otu iji merie ep ...
Okpomoku di oku na ulo oru anyi nwetara Verified Supplier Certificate site TUVRheinland
Dịka otu ọwa dị mkpa nke azụmaahịa mba ụwa, Alibaba Global Site na-adọta ọtụtụ akụrụngwa ndị ahịa ụwa ma na-enye ha nnukwu ozi nke ndị na-eweta ngwaahịa. Iji mụbaa ahịa na inokota ẹdude ahịa ego anyị nwere, anyị ụlọ ọrụ esta ...